Howlgal lagu soo qab qabtay hub iyo dad lala xiriiriyey Al-shabaab oo laga sameeyey Muqdisho+Sawirro – Radio Muqdisho
Howlgal lagu soo qab qabtay hub iyo dad lala xiriiriyey Al-shabaab oo laga sameeyey Muqdisho+Sawirro
Howlgalkaan ayaa lagu soo qabatay shan bambaano, labo bistoolad iyo dukumiinti ay soo qoreen kooxda Al-shabaab iyo 6-ruux oo midi ay haween tahay, iyadoo lagu soo bandhigay saldhiga degmada Yaaqshiid ee Gobolka banaadir, waxaana kiiskooda lagu wareejiyay ciidanka dambi barista eeCID.
Guddoomiyaha Degmada Yaaqshiid Axmed Maxamed Xasan Geedoow ayaa sheegay in door weyn ay ka qaateen Bulshada Degmada howlgalka nabadiidka lagu soo qabtay.
“Howlgalkaan waxaa door weyn ka qaatay shacabka, waana muhiim wadashqeynta shacabka iyo laamaha amaanka, sidaa daraadeed waan u mahad celineynaa Bulshada reer yaaqshiid “ayuu yiri guddoomiyaha.
Guddoomiye ku xigeenka Amniga iyo Siyaasada ee Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Tuulax) ayaa sheegay in looga Baahanyahay dadka kireeya guryaha iyo kuwa ganacsatada ah in ay waajib ku tahay hubinta dadka ay guryaha ka kireynayaan, taasi oo qeyb ka ah sugiddaAmniga.
“Dadka kireeya guryaha waxaa looga baahanyahay in ay hubiyaan dadka ay ka kireynayaan”ayuu yiri guddoomiye Tuulax.
Duqa Muqdisho “Waxaan rajeynaynaa in Ciidanka Boolisku ay ka soo dhalaalaan Masuuliyadda adag ee ku aaddan Amniga Caasimadda”+Sawirro
Horjooge ka tirsan Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu qabtay Howlgal laga Sameeyeen Muqdisho